Ikamelo Elisesitayeleni futhi Elithokomele Esakhiweni Esinhle Sokuqala Ngo-1900 - I-Airbnb
Ikamelo Elisesitayeleni futhi Elithokomele Esakhiweni Esinhle Sokuqala Ngo-1900
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Paolo
Zulazula Edolobheni Laphakade futhi ubuyele ekhaya emthunzini othule kancane weGumbi Eliluhlaza elikhangayo. Uphahla lwezitini oluvalekile luvusa umlando waleli fulethi lasekuqaleni kwekhulu lama-20, kuyilapho ukugeza okuyimfihlo nezindawo ezabiwe ezinesitayela zijabulela ukunethezeka kwesimanje. Yabelana nezinye izivakashi zendlu ngokuhlala okujabulisayo kokuphumula kwakho, ikhishi eliphelele lokwanelisa zonke izidingo futhi likunikeze izakhi eziyinhloko zokudla kwasekuseni. Khona-ke ithala lilinde ukuthi ujabulele indawo yangaphandle!
Zulazula Edolobheni Laphakade futhi ubuyele ekhaya emthunzini othule kancane weGumbi Eliluhlaza elikhangayo. Uphahla lwezitini oluvalekile luvusa umlando waleli fulethi lasekuqaleni kwekhulu lama-20, kuyilapho ukugeza okuyimfihlo nezindawo ezabiwe ezinesitayela zijabulela ukunethezeka kwesimanje. Yabelana nezinye izivakashi zendlu ngokuhlala okujabulisayo kokuphumula kwakho, ikhishi eliphelele lokwanelisa zonke izidi…
“Izivakashi zethu zijabulela isimo sokwamukela nesomndeni, umoya wokungenisa izihambi nokutholakala, kanye namagumbi asanda kulungiswa. Indlu kanye nezikhala ezizimele ziphathwa ngothando nangemininingwane emincane, enikeza ukuhlala okungenakulibaleka nokuthandana. Indawo inamasu okuphila indawo yokuhlala ejwayelekile yamaRoma izinyathelo ezimbalwa ukusuka ku-Imperial Forums kanye neColosseum.”
“Izivakashi zethu zijabulela isimo sokwamukela nesomndeni, umoya wokungenisa izihambi nokutholakala, kanye namagumbi asanda kulungiswa. Indlu kanye ne…
– Paolo, umbungazi wakho
Igumbi lokugeza elihlangene nelokulala, umbhede oyidabuli, Umshini womoya oqandisayo
4.99 (izibuyekezo ezingu-97)
Igumbi licwiliswe endaweni emaphakathi, ephilayo nedumile yaseSan Giovanni, lapho kutholakala khona i-Basilica edumile enegama elifanayo nelaseSanta Croce eGerusalemme, kanye nezitolo eziningi nezindawo zokuchitha ubusuku obumnandi. Ngokuhamba imizuzu emihlanu ungafinyelela ezindaweni zokucima ukoma, izimakethe, i-atm, imitapo yolwazi, amatiyetha, ama-pizzeria, izindawo zokudlela, izitolo, ama-ice cream parlors nazo zonke izinsiza zomphakathi. Ikamelo litholakala efulethini esitezi sesine (alikho ikheshi) lesakhiwo esivamile esingadini.